WARBIXIN: M/weyne Farmaajo ma ku guuleysan doonaa In Gaalkacyo ay hesho Damaanad qaad Amni oo buuxa & Nabad Waarta? | PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL WARBIXIN: M/weyne Farmaajo ma ku guuleysan doonaa In Gaalkacyo ay hesho Damaanad qaad Amni oo buuxa & Nabad Waarta? – PUNTLANDTIMES KA DHIGO WEHEL
Home W.Gudaha WARBIXIN: M/weyne Farmaajo ma ku guuleysan doonaa In Gaalkacyo ay hesho Damaanad qaad Amni oo buuxa & Nabad Waarta?
WARBIXIN: M/weyne Farmaajo ma ku guuleysan doonaa In Gaalkacyo ay hesho Damaanad qaad Amni oo buuxa & Nabad Waarta?
GAALKACYO(P-TIMES)- Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqasho rasmi ah ku tagaya magaalada kala qeybsan ee lagu tiriyo in ay tahay Hooyadii Xornimada Soomaaliya iyo Hooyada dhibaatada ragaadisay dalkan burbursan mudada dheer ee Gaalkacyo, waana mid kamid ah magaalooyinka Taariikh ahaan caanka ah Taariikhda Soomaalida.
Gaalkacyo waxay martigalisay dagaalkii ugu adkaa ee dhexmara beelaha Soomaaliyeed, waxaana hurgumooyinkii ay reebeen maanta laga dareemayaa gudaha magaaladaas, taas oo kalifta dagaalo bada oo sannadyadii lasoo dhaafay dhacay.
Inkastoo tan iyo markii uu xukunka la wareegay Madaxweyne Farmaajo ay soo muuqanayeen dadaalo nabdeed oo ay heshay magaaladan, haddana waxaa jira Ugxumo aasan oo saldhig u ah nabadda gobalka Mudug.
Madaxweynaha Soomaaliya oo shalay ka hadlayay magaalada kutaala waqooyiga fog ee Boosaaso ayaa sheegay in ay ka shaqeynayaan sidii dadka walaalaha ah ee gobalka Mudug u heli lahaayeen nabad iyo daganaansho waarta.
Madaxweynayaasha Puntland & Galmudug waxay bilihii lasoo dhaafay iskaga daba-laabteen Gaalkacyo, ujeedaduna waxay ahayd sidii loo dhameystiri lahaa heshiisyo horey loo gaaray ficilna loogu bedeli lahaa.
Gaalkacyo waxay ka soo kabanaysaa dagaalo ragaadiyey afartii sanno ee lasoo dhaafay, waxayna dagaaladaasi ahaayeen kuwa ay qeyb ka ahayd dawladdii Faderaalka ee xilka wareejisay, waxaana dhibka ugu badan ka yimid markii ay Galmudug sheegatay deegaano aysan joogin.
Isku furnaanshaha magaalada iyo nabada aan cagaha badan ku taagneyn ayaa uga baahan Madaxweyne Farmaajo in uu saldhig wanaagsan u asaaso, waxaana si weyn maanka loogu hayaa sidda ay labada Shacab-ba ugu diyaarsan yihiin soo dhaweyntiisa.
Puntlandtimes waxay heshay xog cadeynaysa in ay dawladda Faderaalku qorsheynayso in Maxkamadeeda ciidamada Qalabka Sida oo dilalka xukunta inta badan iyo guuto ciidan ah oo gaaraysa 450 Askari, lagu wareejiyo Amniga magaalada Gaalkacyo.
Ula jeedada ugu badan ee laga leeyahay ayaa ah in la baajiyo dagaalo iyo dirir dambe oo ka dhacda gudaha magaaladaas, taas oo ay Shacabku aad uga daaleen in ay mar kasta naawilaan qax iyo dhibaato ay muddo dheer kusoo jireen.
Madaxweynuhu wuxuu ku boorin doonaa Shacabka iyo Hogaamiyaasha dhaqanka in ay yihiin cidda laga rabo in ay ka timaado ogolaanshaha iyo beer-nugleylka nabdeed, taas oo ah furaha guusha Nabadda Gobalka Mudug oo ka saldhiga magaalada Gaalkacyo.
Doodaha ugu xiisaha badan ee ay labada dhinacba kala sheegtaan ayaa ah Ilaha dhaqaalaha ee gobalka sidda loo maamulayo iyo sidii loo heli lahaa meelo ka dhaxeeya bulshada labada dhinac oo ay wada maamulaan, taas oo ah qodobada ugu xisaha badan ee ay isku hayaan labada dhinacba.
DAAWO:Arin ka yaabisay bulshada Soomaaliyeed oo Gaalkacyo ka dhacay & Shacabkii ugu badnaa oo iskugu soo baxay bad baadinta…. posted on January 15, 2019
DHAGAYSO:Shacabka Garowe oo ka hadlay arin xasaasi ah & Madaxweyne Denni oo ay ka dalbadeen in wasiirada cusub ay ahaadaan… posted on January 16, 2019
Madaxweyne maamul goboleed oo caan ah oo si dirqi ah uga bad baaday weerarkii Nairobi posted on January 15, 2019
DAAWO:Wargeys caalami ah oo soo bandhigay sawiradda maydadka dadkii ku dhintay weerarkii Nairobi & Caro ka dhalatay posted on January 16, 2019
Dowladdii ugu dhoweyd Kenya oo si adag uga hadashay weerarkii Nairobi & Safaarado badan oo…. posted on January 16, 2019
jordan 11 on WAR DEG DEG AH:Isimadda Puntland & Musharaxiintii ugu badnayd oo kulan hada uga socda Garowe
nike sneakers on WABRIXIN+XOG: Yaa ugu cad-cad Doorashada M/weyne-nimada Puntland ee todobaadkan dhacaysa?
adidas outlet on Natiijadii wareegii koowaad ee doorashada madaxweyne ku xigeenka Puntland oo lagu dhawaaqay & Axmed Karaash oo…
lacoste outlet on LIVE U DAAWO: Doorashadii madaxtinimada Puntland oo hada bilaaban rabta & Xarunta Baarlamaanka oo…….
Linda Kolk on Wararkii ugu dambeeyey ee qaraxyadii Muqdisho & Tirada dadkii ku dhintay oo….